isan-taona ireo trangan’aretina homamiadana hita ka ny 50%-n’ireo dia homamiadana mahazo ny vehivavy avokoa. Anisan’ireny ny homamiadan’ny nono, ny vozon’ny tranon-jaza…Amin’ny ankapobeny anefa, raha araka ny fanazavan’ny dokotera Randrianarivo Hasinjaka, tale misahana ny aretina tsy mifindra eo anivon’ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka dia efa lasa lavitra ilay aretina vao manatona tobim-pitsaboana ny 60 %-n’ireo marary ireo. Tsy vitsy ireo mamoy ny ainy, indrindra fa ireo tsy mahatojo ny fitsaboana hatramin’ny farany. Antony mahatonga izany araka ny fanadihadiana natao ny tsy fananam-bola fa eo dia eo ihany koa ny tsy fahafantarana sy ny fiononana amin’ny fihinanana tambavy fotsiny na fanatonana olona milaza fa mpitsabo nentin-paharazana kanefa mpisoloky ny ankamaroany. Nankalazaina omaly tetsy amin’ny hôpitaly HJRA Ampefiloha ny andro maneran-tany iadiana amin’ity aretina iray ity. Natomboka tamin’ny alalan’ny diabe izany entina hanairana ny mpiara-belona. Nanohana akaiky ny hetsika ny vondrona Star izay nanolotra eau vive 500 tavoahangy ho an’ireo mpanao diabe. Hetsika efa fanaon’ny vondrona Star isan-taona moa ny tahaka izao, indrindra fa ny fanohanana ny minisiteran’ny fahasalamana amin’ny fitsinjovana sy ny fikarakarana ny fahasalamam-bahoaka.